Qubsuma Koo 16:'Osoon konkumaa rakkoon akka hin umamne gochuu dand'ee baay'een gammada ture' - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma Koo 16:'Osoon konkumaa rakkoon akka hin umamne gochuu dand'ee baay'een gammada ture'
Image copyright MENBERE AKLILU
Goodayyaa suuraa Manbara Akliilu mana nyaataa keessatti
Manbara Akliiluu jedhama. Reechimond Saan Firaansiisko keessan jiraadha.
Yeroo jalqabaatiif kan Itoophiyaa irraa itti imale. Xaaliiyaaniidha. Achiisi ergan waggoota 13 jiraachuun mucaas achumattan godhadhe. Achiinis yemmu mucaan koo waggaa 11 gutuu jireenya fooyya'aa barbaachan gara Ameerikaa, Kaalifoorniyaa imale.
Ergan Ameerikaa dhufee kophaakoo mucaakoo barsiifadhee hanga dandeettii kootiin namoota biraas deggarsa taasisuu kanan dada'e erguman Asi ga'ee booda. Lammii Itoophiyaa ta'uu kootti bayyee gammaddu ta'uus, oolmaa Ameerikaan naaf oolte xiqqaa miti.
Asitti nama barateefi nama hojjatuuf balballi banaa dha. Dabalataanis Ameerikaan biyya bilisummaan itti dagaage, mirgi kee biyya itti kabajamuu fi biyya sagalee kee ol kaaftee tti dhageesifatuu dha. Sababa kanaafuu of irra darbee karaa garagaraatiin namoota biroo gargaaruu danda'era.
Eessayyuu yoon ta'e, nyaachuuf biddeen irraa wanti naaf caal jiraachuu baatuus, tarii sababiin waggoota dheeraa achi tureef haa ta'uu hinbeeku garuu nyaata warra Xaaliyaanii baayye jaaladha. Yoo nyaadhuus ittiin gammada.
Gosoota paastaa hunda nan jaaladha sababni isaas hojjachuuf salphaa dha. Paastaa, zayita ejersaa fi timaatimiin jiraannaan paastaa mi'aa soorachuun ni danda'ama.
Haala jireenya biyyaa baayyeen yaada, keessattuu walitti dhufeenyaa fi ollummaa baran ani keessattu guddadhee sana. Haalli waliin jireenyaa, bunaaf wal waamuu, sukkaaraafi Distii fa'i walirraa ergiifachuu, ollaa dhaqanii haasa'uu fi wal gargaarsa ture nan yaada.
Xaaliyaanittis ta'e Ameerikaatti jireenya hawaasummaa akkasii qabaachuun ulfataadha. Daa'ima kee olaatti dhiiftee deeuu mitii ollaa waliin daandirratti yoo wal agarru iyyu akkuma nama wal hinbekneetti wali bira dabarra.
Manakoo taa'ees ta'ee kutaa ciisichaa koo keessa hirkadhees, karaa foddaatiin magaalaa qarqara bishaanitti argamtu Okelaandii natti mul'ata. Yeroo tokko tokkos yoon yaadaan baduu wantoota naannoo kootti argaman kanneen ilaaluun carra qabeettii ta'u koo na yaadachisa.
Dhugumattis, naannoon keesa jiraachu baay'ee nama gammachisa. Kanaafu jireenya namoonni baayyeen hawwan sana bakkaan gaheera jedheen yaada.
Turtii koo biyya hamba keessatti muudann heddun qaba. Hunda caala kan baayee na dinqu garuu mudannoon silaa mana nyataa koo ittiin dhabuuf ture tokko dha.
Yeroo tokko nama gamoo manni nyaataa koo irratti argamu natti kireesse, akkan guyyoota 30 keesatti gadhiisee bahuuf xalayaa akeekkachiisaa naan gahee.
Image copyright Menber Aklilu
Akkamitti akk ta'e osoo hin beekiin kantiibaan Magaala Riichmoond waa'ee kana dhagahinis namoota naannoo walitti qabuun duula gageessaniin osoon hinbahiin hafeera.
Kantiibaan magaala Riichimoond hojiilee gargaarsa ani hojjedhu waan beekaniif, na galateefatanii duluun isaanii akkasumas hawasni naannichaa naaf kabaja qabaachuun isaanii bayyee na ajaa'ibe.
Daandii jireenyaa dheeran qaxxaamuree as gahe yoomiyyuu hin irraanfadhu. Rakkoo keessa baheen as gahe. Jireenyi daandiirraa qaama jireenya godansaa kooti.
Ergan rakkoolee hedduu keessa darbee booda ture kanan hojii sa'aatiitti doolaari 7 kanfalamu argachuu daandii jireenyaa koo sirreefachu kanan eegalee. Yeroo keessa kunoo hojiin waggaa 16 dura egalee amma milkaa'ina argachuun sadarkaa kanarra gahe.
Kanan keessa darbe sana yaadachuun kunoo hanga humna kootii warra biraa gargaaraan jira.
Goodayyaa suuraa Manbara fuuldura mana nyaataa isheetti warra mindeessitee hojachiiftu waliin
Ayyaana guyyaa galateeffanna (thanks giving) jedhamutti namoota jireenyi isaanii daandiirra ta'e 1,200 bakka jiran irraa walitti qabee nyaachisuun, itti uffisee, jireenya isaanii guyyaa guyyaaf waan isaan gargaaru kennuun waggaa waggaan gargaaraan jira.
Kabaja guyyaa haadholiittis haadholii kophaa daa'ima guddisanii fi daa'ima dhabanii kophaa jiran walitti qabeen guyyaa tokkolle gammachuun akka dabarsiniin godha.
Guyyaa kanatti midhaganii akka oolan gara mana midhagina dubartootaa deebanii mana nyaata kootti ammoo afeerraa qopheessuun guyyicha gammachuun akka dabarsan godha.
Baratoota qabxii gaarii qabaniifi maatiin isaanii harka qalleeyyii baasii barnootaa kaffaluun, barnootatti akka cima gargaaraan jira. Wayit isaan barnoota fixan kanneen biroo rakkoo walfakkaataa keessa jirananiin bakka buusa.
Wantiin amma irratti xiyyeefadhee jiru, dhimmoota balaan to'annoo kootiin ala ta'an qaqabsiisaa jira irrattidha. Osoon gonkumaa rakkoon akka hin umamne gochuu danda'e baay'ee gammada ture. Gammachuun koos daangaa hinqabu ture.
Fakkenyaaf magaala Riichmoond Kaalinforiniyaatti haala yakka balleessu baadhulleen xiqqeessu osoon danda'ee hawwii kooti. Gama koon garuu waanan danda'u gochaan jira.
Sababni isaas, bara 1984 ani mataan koo daandiirra jiraadha ure. Haala sana keessaa kan na baasee ammoo adddunya kana. Kanaafu, wantan addunyaa kanarraa argadhe hunda deebiisee addunyaa kanaaf kennuun qaba jedheen amana.
Hawaansi naannoo Riichimoond jaalala naaf qabanirraa kan ka'e naannoo haroo saniitti gamoo mataa koo akkan qabaadhuuf na deggaraniiru.
Osoo naaf danda'amee ammoo osoo biyyan itti dhaladhe Gojamitti hoteela maqaa haadha kootii keessatti ofi argee baayyee natti tole ture.